I-Bolt Factory - Abakhiqizi baseChina China, Abahlinzeki
I-hexagona eshisayo eshisayo ...
Sigcina inani elikhulu le-din931 hex bolt. Lezi zihloko ze-hex-headts ezinentambo ezilinganiselwe futhi zicijiswa kulo lonke ubude ngokusho kwe-DIN 931 ne-DIN 933 zi-zinc zalungiswa ukuvikelwa kokugqwala.
I-DIN6921 Flange Bolt inomsebenzi wokumisa ukuzungeza, otholakala ngaphezu kwengxenye yokuxhuma edinga indawo eyisicaba noma bushelelezi. Futhi, i-DIN6921 Flange Bolt yethu ilungele isisekelo sokhonkolo oshumekiwe, futhi isetshenziselwa ukulungisa izisekelo zemishini nemishini. Ngenxa yobukhulu obufanele nokuklama okuyi-compact, ingabekwa yonke indawo ukuze isize ukukhipha isikhala sezindawo ezinomkhawulo. Ukubukeka okunobuhle kubukeka kukuhle futhi muhle.
I-hot-dip galvanized hendagonal bolt
Igama lomkhiqizo Hot dip Galvanizing hex bolt Size M2-M160 Material Carbon iron, Stainless, Njengoba Izidingo zakho. Ibanga leBanga: 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 Ect Surface Finishing Plain, passivated, (ROHS) Zn-plated, Ni-plated, Njengoba izidingo zakho. I-standard DIN GB ISO JIS BS ANSI Certification ISO9001, SGS, I-OEM engeyona imigomo iyatholakala uma unikeza umdwebo noma isampula. Ukupakisha okujwayelekile kwephakheji okujwayelekile noma ngokwesidingo samakhasimende ...
Hot-dip galvanized I-Anti-theft Bolt
Igama Umkhiqizi we-Fastener okhethekile we-bolt anti-theft bolt kanye ne-nati ngokusho kwemfuneko yekhasimende. Izinto zensimbi engagqwali, i-carbon iron Finish Plain, i-zinc ibekwe phezulu, ikhwalithi emnyama Ikhwalithi ephezulu ye-Anticorrosive Performance salt Spray Test Ifinyelela ku-1000-2000 Hours Isicelo Marchining, Umkhakha weKhemikhali, Ezemvelo, Izitifiketi Zokwakha ISO9001 2008 Amabhokisi namaphakethe noma ngokwesidingo sekhasimende. Isikhathi sokulethwa kuvame uku-15 ...
Sigcina inani elikhulu le-din931 hex bolt. Lezi zihloko ze-hex-headts ezinentambo ezilinganiselwe futhi zicijiswa kulo lonke ubude ngokusho kwe-DIN 931 ne-DIN 933 zi-zinc zalungiswa ukuvikelwa kokugqwala. uhlobo: JiuHe M16 usayizi din931 hex bolt, M20 ububanzi din931 bolt, M24 din931 standard hex bolt, m30 din 931 hex bolt, konke kusitoko. Kusetshenziswe kabanzi kuyo yonke indawo yomkhakha jikelele.
I-U-bolt yisibhobo esimethini u-U enemicu yesikulufa emikhawulweni yomibili. I-Carbon iron U bolt isho ngokusobala ukuthi impahla ye-bolt ye-U iyinsimbi yekhabhoni.
I-Carbon iron U bolt ngokuyinhloko isetshenziselwe ukusekela i-pipework, amapayipi lapho kudlula uketshezi kanye nama-glue. Njengoba kunje, ama-bolts wensimbi ekhabhoni ayalinganiswa kusetshenziswa ukukhuluma kobunjiniyela be-pipe-work. I-U-bolt yensimbi ye-Carbon yayichazwa ngosayizi wepayipi elaliwusekela. I-U-bolt yensimbi ye-Carbon nayo isetshenziselwa ukubamba izintambo ndawonye.